War deg deg ah: Madaxweynaha Soomaaliya oo Mambassa kula kulmaya hogaamiyaha Jabhadda. | Salaan Media
War deg deg ah: Madaxweynaha Soomaaliya oo Mambassa kula kulmaya hogaamiyaha Jabhadda.
Warar goor dhaw na soo gaadhay ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya uu garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ka dhoofay isaga oo kusii jeeda dalka Kenya gaar ahaan magaala xeebedka Mombassa.
Wararka hor-dhac ah ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh uu magaalada Mombaasa kula kulmi doono madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ay ka wada hadli doonaan arrimo khuseeya labada dowladood, hasa yeeshee arintu intaa kaliya kuma koobna ee Axmed Madoobe oo ku sugan Nairobi ayaa lafilayaa in uu madaxweynaha si toos ah ula kulmo arintaas oo ah mid uu qaban qaabiyay Uhuru Kenyatta.
Sheekh Axmed Madoobe oo ah hogaanka maamulka magaalada Kismaayo iyo ururka Raskambooni oo hadda ku sugan Nairobi ayaa la sheegayaa in madaxweynaha Soomaaliya la hor geynayo si wada hadal toos ah uu u dhex maro.
Arrinta ugu weyn ayaa ah shirka Kismaayo oo ay dawladu dooneyso in lagu soo wareejiyo maamulkiisa, maadaama masiirka dalkaay iyadu madax ka tahay waxaana lafilayaa in Sheekh Axmed Madoobe lagu qanciyo arintaasi maadaama uu la’yahay meel uu wax marsiiyo.
Axmed Madoobe oo awalba la’aa qaab uu wax u socodsiiyo ayaa waxaa ladul dhigay ciidamo fara badan oo dowlada Soomaaliya leedahay kuwaas oo magaalada Kismaayo buux dhaafiyay maalmahaan arintaas oo ku qasabtay in uu Kenya ka codsado in dowlada Soomaaliya ay la heshsiiso u gana qaado cadka ay u ogoshahay maadaama talo faro ka baxday.